नेपालका महँगा अभिनेत्रीहरु, कसले कति पारिश्रमिक लिन्छन ? – Rastriyapatrika
नेपालका महँगा अभिनेत्रीहरु, कसले कति पारिश्रमिक लिन्छन ?
निर्देशक हेमराज भने केही फरक मत राख्छन् । उनी कलाकारले फिल्मको टिम, बजेट र स्टोरी स्क्रिप्ट हेरेरआफ्नो पारिश्रमिकमा थपघट गर्न सक्नुपर्ने औंल्याउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय फिल्ममा स्टारकास्ट गरिएको हुन्छ । स्टारकै कारण चल्ने खालका हुन्छन् । त्यस्ता फिल्ममा स्टारले पनि हाई डिमान्ड गर्नु ठीकै हो । तर सँगसँगै तिनले गतिलो कथा वा पटकथा भएका तर बजेट थोरै छ भने त्यस्तामा न्यून पारिश्रमिक लिएर पनि खेल्नुपर्छ । कतिपय फिल्म स्टारका कारण चल्छ भने कतिपय स्टारलाई फिल्मको गतिलो कन्टेन्टले चलाइरहन्छ । चलाख कलाकारले यस्ता कुरालाई बुझेको हुन्छ ।’